Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu India: ụgbọ elu ọhụrụ na Horizon
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Agbọ elu India
Ngalaba ụgbọ elu India, dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njem niile na njem nlegharị anya, anaghị enwe oge na -agwụ ike, n'agbanyeghị ma oge dị ugbu a ọ dị mma ma ọ bụ na ọ dịghị mma. Otú ọ dị, oge a n'ime oge a nwere ngosipụta niile dị mma.
Jet Airways nwere ike ịlaghachi azụ ịlọ ụwa ọhụrụ, yana ego na ndị ọrụ site na akụrụngwa ọhụrụ.
Akasa Air nwere ike gbapụ tupu ngwụcha afọ a na -ekele nnukwu akụkụ nye onye na -etinye ego ijeri, Rakesh Jhunjhunwala.
Vistara, Air Asia India, na Air India ga -atụkwa anya ịhụ uto maka ụgbọ elu ha.
N'oge COVID-19 nọ-ma ọ ka dị-na-emebi ụgbọ elu, njem, na naanị ndụ n'ozuzu, na-abịa akụkọ nwere ike ịdị ka egwu na ntị, ọkachasị ndị ga-abụ ndị njem.
Mgbe ọtụtụ ihe na -eme ndị na -anya ụgbọ elu bụ maka mfu nde na dollar na crores na euro - ị na -akpọ ego ahụ - na ihu mmechi, ịghara ikwu maka mbibi n'ime Air India nke dịbu ọnụ ahịa, enwere opekata mpe 2. ụgbọ elu na -abịa na mpaghara India na n'elu igwe na ọdịnihu adịghị anya.
Enwere okwu siri ike banyere Jet Airways dara na -alaghachi na nlọghachị ọhụrụ, na -enweta ego na ndị ọrụ site na akụrụngwa ọhụrụ. Dị ka atụmatụ na-adị n'ike n'ike, a ka nwere ọtụtụ mkpụrụ na ihe mkpọchi ka ga-akpachi anya ka ndị njem nwee ike fepụ n'ọdụ ụgbọelu zuru oke.